Mutemo Unonyanya Kukosha muSocial Media PR | Martech Zone
Unoda kuziva chikamu chakanakisa chekushandisa vezvenhau sechikamu chenyu mushandirapamwe wehukama neruzhinji? Iko hakuna mitemo.
PR vanhu vanogara vachirangarirwa nezvemitemo. Tinofanira kutevera AP Stylebook, kuburitswa kwenhau kunofanirwa kunyorwa neimwe nzira uye kuurayiwa pane dzimwe nguva.
Zvemagariro midhiya mukana wekambani yako kutyora muforoma uye kugadzira zvakasarudzika zvemukati izvo zvinonyanya kukosha kune veruzhinji. Izwi rakakosha rinogutsikana. Zvemukati iri sirivheri bara. Kana iwe uchigona kugadzira zvinonakidza uye zvitsva zvemukati, ipapo uchave uri nhanho imwe padhuze nekusangana nezvinangwa zvako nezvinangwa.
Unotoziva zvandiri kutaura nezvazvo. Wati wambofunga here kutsvaga webhusaiti yekambani kana Facebook peji chete kuti uone kuti haipo? Kana izvo hazvina kuvandudzwa kubva munaKurume 2008? Iwo makambani anodonha kubva kune yako radar, uye anorasikirwa nekuvimba kwako uye nerukudzo.
Kugadzira zvinyorwa zvitsva uye zvinonakidza kwete zvinongokwevera vanhu kumasayiti ako, asi zvakare zvinoita kuti vadzokere. Kiyi yekuwana izvo zvirimo zviri nyore: tsvaga izvo vashanyi vako vanoda, uye ramba uchizviita. Izvo hazvina basa kuti ipuratifomu ipi. Twitter, Youtube, Flickr, Mativi mana, kana bhurogu… gadzira zvemukati zvemushandisi wako uye chengeta ichiuya
Yemagariro midhiya zano ine simba, asi zvakare inonakidza kune vanhu vePR nekuti isu tinokwanisa kuyedza zvinhu zvakasiyana uye kuongorora mhedzisiro ingangoita munguva chaiyo. Kubva ipapo tinogona kugadzirisa mushandirapamwe wedu kuti usangane nezvinodiwa neruzhinji. Kuti ubudirire pamhepo haugone kutya edza chimwe chinhu chitsva. Kana vatengi vako vachida mapikicha ebhizinesi rako vape iwo mafoto. Kana ivo vachida kuona nhau kubva mukati nekukomberedza indasitiri yako, wozovapa.
Hukama hwepaguru hausi kuchinja. Zvachinja. Zviri kwauri iwe sePR nyanzvi kuti unzwisise simba pamwe nemikana yesocial media, uye wozogadzira zano rekushandisa zvese zvishandiso zviripo. Maturusi aya matsva uye zvakakosha kuti udzidze kubva pakubudirira kwako, sezvaungaita nekutadza kwako.
Tags: hukama hwevanhuevanhu vezvenhauSocial Media Marketingpasocial media pr
Jul 29, 2010 na1: 54 PM
Kunaka post Ryan. Ko zvakadii parutivi rwezvinhu asi? Vatengi vazhinji vatinoshanda navo @Vocenation havadi kushandisa $$$ kuyedza zvinhu zvitsva. Ivo vanoda kushandisa $ $ $ pamazano anouya kubva muchiitiko uye izvo zvinozogoneswa nemashambadziro ekutungamira. Dzimwe nharo dzekare dzezera (uye nezera zera ndinoreva makore apfuura matanhatu) muno asi izvi ndizvo zvandaifunga nguva yese yandaiverenga tsamba yako.
Jul 29, 2010 na7: 58 PM
Colin, ndinoona izvi zvakanyanya. Chandinonyatsoedza kutyaira kumba netarisiro idzi ndechekuti zano racho riri kushanda here kana kuti kwete. Kana zvirizvo, saka zvakanaka… nzira yakachengeteka ine mashoma kukura ingave nzira yekutora. Zvisinei, ini ndinoda kuratidza data uye kuongororwa kwekukura kwepamhepo, kutsvaga, kutora chikamu munharaunda, nezvimwe zvinoratidza kuti maitiro ari kuchinja
Dzimwe nguva tarisiro haisati yatenda kuti zvinhu zvachinja… uye ini ndiri kunze uko. Nekudaro, vanonzwisisa vanoona shanduko uye ndinovavimbisa kuti basa rangu nderekuvabatsira mukuchinja.
Jul 29, 2010 na8: 10 PM
Ini ndinowana izvi kubva kune vakawanda vatengi, "Unogona here kutiratidza zano rakaratidza, uye rinoshanda?"
Mhinduro ndeyekuti 'hongu', asi hazvisi nyore nguva dzose. Yese kambani, hunhu hwese hunoda imwe mhando yezwi. Naizvozvo, zano rakafanana harisi kuzogara richishanda.
Gadzira chirongwa, asi suduruka kubva pachirongwa kana paitika chinhu chinotyisa. Kurongeka kwekugadzira kunotungamira kune yakanakisa kushambadzira, online kana neimwe nzira. Ndiwo maonero angu chete!
Jul 29, 2010 na11: 48 PM
Seyaimbova kambani yekutaurirana VP, ndinotenda maonero ako pamitemo. Asi ini zvakare ndinonzwisisa kuti panofanirwa kuve nemirayiridzo inochengetedza iyo kambani uye zvemukati zvinogadzira. Uye ini zvakare ndinofunga zvakakosha kuti kana PR inogadzira zvemukati, inofanirwa kufunga nezve maitiro ayo paPR, kushambadzira, brand, rutsigiro rwevatengi uye kutengesa. Zvinoita kuti ndifunge nezvekudya chete dhizeti yekudya kwemanheru. Ini ndiri munhu mukuru. Ini ndinogona kudya zvandiri kuda, pese pandinenge ndichida. Izvi hazvireve kuti ndicha. 🙂